သတိပြုရန် ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲများကို VPN ပိတ်ပြီးမှသာလျှင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
IPTV မှ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန်
MPT4U မှ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန်
၂၀၂၁ -၂၀၂၂ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဥ်များပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
MPT mobile network သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် များကို MPT IPTV နှင့် MPT4U ၏ တိုက်ရိုက် Mobile Website မှဖြစ်စေ Android / iOS Application မှဖြစ်စေ Download လုပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ တို က်ရိုက်ပွဲစဉ်များအပြင် Highlight , Goals of the week နှင့် Gold Rush အစီအစဉ်များကိုလည်း MPT mobile network ဖြင့် mobile ဖုန်းမှတစ်ဆင့် စာရင်းသွင်း ဝန်ဆောင်ခ အခမဲ့ဖြင့် နေရာမရွေး အချိန်မရွေး ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
FAQ of “MPT IPTV” for English Premier League (EPL)
၁။ EPL (English Premier League) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူကြိုက်အများဆုံး ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကလပ် ၂၀ တွင် အပတ်စဉ် ပွဲစဉ် ၃၈ ပတ် ကြာသည်။ ၎င်းပွဲစဉ်များသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ အထိဖြစ်ပါသည်။
၂။ MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှု တွင် EPL ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှု တွင် EPL ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပွဲစဉ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊
ဟိုက်လိုက်ဗွီဒီယိုနှင့် “Goal of the week” “Goal Rush” များကို MPT ကွန်ရက်မှတဆင့် သီးသန့် ဝန်ဆောင်
ပေးစရာမလိုဘဲ MPT IPTV တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှု တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရုပ်သံလိုင်းများ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ ပါဝင်သော ဗွီဒီယိုများကိုလည်း ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်ပါသည်။
၃။ MPT IPTV ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ။
MPT IPTV တွင် Android အပလီကေးရှင်းနှင့် iOS အက်ပလီကေးရှင်းသာမက မိုဘိုင်းဝဘ်ဗားရှင်းလည်း ပါရှိသည်။ အသုံးပြုသူသည် ၎င်းကို Google Play Store နှင့် App Store တွင်“MPT IPTV” ဟု ရိုက်ထည့်၍ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ MPT အသုံးပြုသူများ Android အတွက် Lo Ta Ya ( https://lotaya.mpt.com.mm/event/268 ) မှ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပြီး MPT မိုဘိုင်းကွန်ရက်ဖြင့် အခမဲ့ရယူ နိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) *1717# ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် SMS မှတစ်ဆင့် လင့်ခ်များကို လွယ်ကူစွာရယူနိုင်ပါသည်။
၄။ MPT မှ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုဘာကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသလဲ။
MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး MPT သုံးစွဲသူများကို မိုဘိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းတွင် လူကြိုက်အများဆုံး ဘောလုံးအသင်းဖြစ်သည်။ ဤထူးခြား သော ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးခြင်းဖြင့် MPT သုံးစွဲသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်ဖြစ်ပါ သည်။
၅။ MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ဤဝန်ဆောင်မှု ၏ အကျိုးကျေးဇူးကား အဘယ်နည်း။
MPT သုံးစွဲသူများသည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သော အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲများ၊ SKYNET SPORTS-6 (24/7), SPORTS 1~5, SPORTS+ ချန်နယ်များ တွင်ပြသနေသော အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း ၊ ဟိုက်လိုက်ဗွီဒီယိုနှင့် “Goal of the week” “Goal Rush” များကိုလည်း ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ MPT သုံးစွဲသူများ သည် အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး မိမိ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် MPT ကွန်ရက်မှတဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၆။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ နှင့် ဗွီဒီယိုများကို ဘယ်လိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသလဲ။
MPT အသုံးပြုသူများသည် အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပွဲစဉ် ကို “MPT IPTV” App ဖြင့် Android (5.0 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍) ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ သို့မဟုတ် IOS (9.0 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော) အတွက် App Store သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဝဘ်ဗားရှင်း (https://iptv.mpt.com.mm/) မှ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် ဝန်ဆောင်မှု icons များ ပြသထားသည့် “MPT IPTV” icons များကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် “MPT4U” App သို့မဟုတ် ဝဘ်ဗားရှင်းမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည်။
၇။ အသုံးပြုသူများသည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ (သို့မဟုတ် )ဗွီဒီယိုကို Wi-Fi ကွန်ယက် သို့မဟုတ်
အခြားမိုဘိုင်း ကွန်ယက်များ မှတဆင့် အသုံးပြုနိူင်ပါသလား။
အသုံးမပြုနိူင်ပါ။ ၎င်းကို MPT မိုဘိုင်းကွန်ယက်မှသာ အသုံးပြုနိူင်ပါသည်။
၈။ MPT IPTV မှ အခြားရုပ်သံလိုင်းများနှင့် VOD contents များကို ဝန်ဆောင်ခ တစ်ရက် ၉၉ ကျပ်ပေးဆောင်ပြီး အခြားအင်တာနက်လိုင်း/Wifi ဖြင့်ကြည့်လို့ရသော်လည်း ဘာလို့ EPL content တွေကို ကြည့်လို့မရပါ။ ဘာလို့လဲ။
EPL ဖြင့် သက်ဆိုင်သော content များကို MPT မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အခြားအင်တာနက်လိုင်း/Wifi ဖြင့် ကြည့်ရှုလို့ရမည်မဟုတ်ပါ။
၈။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ နှင့် ဗွီဒီယိုများ ကြည့်ရှုရန် ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသလား။
အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် ပါ၀င်သောဝန်ဆောင်မှုများကို သီးသန့် ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ MPT မိုဘိုင်းကွန်ယက်မှတဆင့် အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (MPT ဒေတာ အသုံးပြုခ သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။)
၉။ သုံးစွဲသူများသည် ဒေတာအတွက် ဝန်ဆောင်ခ သက်သာရန် မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသနည်း။
MPT သည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော data package များစွာကို ရောင်းချပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ များအနေဖြင့် MPT4U App တွင် (သို့မဟုတ်) *106# ကို ခေါ်ဆို၍ ဒေတာများကို ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါ သည်။ (အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် အတွက် သီးသန့် package မရှိပါ။)
၁၀။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ နှင့် ဗွီဒီယို များ၏ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါသလား။
ဖုန်းနှင့် အသုံ:ပြုသူများအတွက် 1K HD (1280*720P) & SD (720*576P)ရုပ်ထွက်များဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၁။ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းတွင် ဗီဒီယို ရုပ်ထွက်ကိုမည်သို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသလဲ။
၁၂။ ကြည့်ရှုနေစဥ် ရပ်တန့်သွားပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
၁၃။ ရုပ်သံများ ရုပ်ထွက်မကောင်းပါက မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်မည်လဲ။
• အင်တာနက်လိုင်းစွဲအား အားနည်းခြင်း
• App/web တွင် ရုပ်သံလိုင်းများ ကြည့်ရှုနေပါက ရုပ်ထွက်ကို HD သို့ပြောင်းလဲပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၄။ MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုနေစဥ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
၁၅။ MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုနေစဥ် အသံမကြားရပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
၁၆။ MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှုတွင် မျက်နှာပြင်အပြည့်နှင့် ကြည့်ရှုခြင်းကို မည်သို့ ပိတ်ရမည်နည်း။
၁၇။ Web ကို အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ browser ဖြင့် ဗီဒီယိုကိုမကြည့်နိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
၁၈။ MPT အပိုဆုဒေတာလက်ဆောင်များဖြင့် MPT IPTV ဝန်ဆောင်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား။
MPT အပိုဆုဒေတာလက်ဆောင်များဖြင့် MPT IPTV ဝန်ဆောင်မှုများကို ကြည့်ရှုနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးပါရစေ။ MPT IPTV အက်ပလီကေးရှင်း ဒေတာအသုံးပြုခကို လူကြီးမင်း ဝယ်ယူထားသော data package/ လက်ကျန်ငွေ မှကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။ MPT မိုဘိုင်းကွန်ယက်ဖြင့် MPT IPTV အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုရာတွင် လူကြီးမင်း ဝယ်ယူထားသော data package/ လက်ကျန်ငွေ လုံလောက်မှုမရှိပါက အသုံးပြု၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
EPL is the top-level football league in England, which is one of the most popular football leagues in the world - 20 clubs have weekly matches for 38 weeks. It will last until May 2022.
Users can watch it via “MPT IPTV” application, available for Android (5.0 or more), or App Store for IOS (9.0 or more) or mobile web version (https://iptv.mpt.com.mm/). Users also can enjoy it via “MPT4U” application or web version by clicking on “MPT IPTV” icons which show on service icons area.
ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ”) သည် လူကြီးမင်း (“လူကြီးမင်း” ၊ “လူကြီးမင်း ၏”) နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”, “ကျွနု်ပ်တို့”, “ကျွနု်ပ်တို့ကို”, “ကျွနု်ပ်တို့၏”) တို့အကြား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအား MPT IPTV (“ဝန်ဆောင်မှု”) လူကြီးမင်းအသုံးပြုမှုအပေါ် စီမံ အုပ်ချုပ်သည့် စည်းနှောင်မှုရှိသော စာချုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
These Terms and Conditions (“Terms and Conditions”) isabinding contract between you (“you”, “your”) and Myanma Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”) governing your use of our service, MPT IPTV, (the “Service”).